HazeCoin စျေး - အွန်လိုင်း HAZE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို HazeCoin (HAZE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ HazeCoin (HAZE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ HazeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
HAZE – HazeCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ HazeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
HazeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
HazeCoinHAZE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00163HazeCoinHAZE သို့ ယူရိုEUR€0.00138HazeCoinHAZE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00125HazeCoinHAZE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00149HazeCoinHAZE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0148HazeCoinHAZE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0103HazeCoinHAZE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0361HazeCoinHAZE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00607HazeCoinHAZE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00217HazeCoinHAZE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00227HazeCoinHAZE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0368HazeCoinHAZE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0127HazeCoinHAZE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00864HazeCoinHAZE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.122HazeCoinHAZE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.274HazeCoinHAZE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00224HazeCoinHAZE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00245HazeCoinHAZE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0506HazeCoinHAZE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0114HazeCoinHAZE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.173HazeCoinHAZE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.94HazeCoinHAZE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.629HazeCoinHAZE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.119HazeCoinHAZE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0452
HazeCoinHAZE သို့ BitcoinBTC0.0000001 HazeCoinHAZE သို့ EthereumETH0.000004 HazeCoinHAZE သို့ LitecoinLTC0.00003 HazeCoinHAZE သို့ DigitalCashDASH0.00002 HazeCoinHAZE သို့ MoneroXMR0.00002 HazeCoinHAZE သို့ NxtNXT0.136 HazeCoinHAZE သို့ Ethereum ClassicETC0.000228 HazeCoinHAZE သို့ DogecoinDOGE0.466 HazeCoinHAZE သို့ ZCashZEC0.00002 HazeCoinHAZE သို့ BitsharesBTS0.063 HazeCoinHAZE သို့ DigiByteDGB0.0619 HazeCoinHAZE သို့ RippleXRP0.00545 HazeCoinHAZE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 HazeCoinHAZE သို့ PeerCoinPPC0.0057 HazeCoinHAZE သို့ CraigsCoinCRAIG0.759 HazeCoinHAZE သို့ BitstakeXBS0.0711 HazeCoinHAZE သို့ PayCoinXPY0.0291 HazeCoinHAZE သို့ ProsperCoinPRC0.209 HazeCoinHAZE သို့ YbCoinYBC0.0000009 HazeCoinHAZE သို့ DarkKushDANK0.534 HazeCoinHAZE သို့ GiveCoinGIVE3.61 HazeCoinHAZE သို့ KoboCoinKOBO0.368 HazeCoinHAZE သို့ DarkTokenDT0.0015 HazeCoinHAZE သို့ CETUS CoinCETI4.81
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 08:10:02 +0000.